Global Voices teny Malagasy » Fihetsiketseham-panoherana tarihin’ny tanora ao Thailandy mahazo fanohanana avy amin’ny olom-pirenena mitaky ‘demaokrasia tena izy’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Septambra 2020 4:58 GMT 1	 · Mpanoratra Prachatai Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Azia Atsinanana, Thailandy, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Tanora, Zon'olombelona
Ny lahatsoratra etoana  dia avy amin'i Prachatai, tranonkalam-baovao mahaleotena any Thailandy, nahitsy sy navoakan'ny Global Voices indray ho ao anatin'ny fifanekena hifampizara votoaty.
Lazaina ho fihetsiketseham-panoherana lehibe indrindra taorian'ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2014  ny fihetsiketseham-bahoaka notontosaina teo amin'ny Tsangambaton'ny Demaokrasia tao Bangkok tamin'ny 16 aogositra. Mihoatra ny 20.000 ny vahoaka nanatevin-daharana ny fihetsiketsehana izay nanomboka tamin'ny telo ora tolakandro ary nizotra mandra-pahatonga ny manodidina ny tamin'ny 11 ora alina.
Teo ambonin'ny lampihazo lehibe, nifandimby ny mpikabary niresaka olana maro manomboka amin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona any an-tsekoly, ny fitoviana ara-karazana (lahy/vavy), ny zon'ny mpiasa ka hatramin'ireo olana atrehin'ny olona any amin'ny faritany atsimo. Nanohy tamin'ny fanerena ho amin'ny fitakiana telo  [mg] natao nandritra ny hetsi-bahoaka tamin'ny 18 jolay ihany koa ry zareo: fampitsaharana amin'ny fanorisorenana ny olompirenena, fandrafetana lalampanorenana vaovao, ary fandravàna ny parlemanta.
Tonga eto amin'ity hetsika ity aho satria tsy mbola nahita praiminisitra nandainga tamin'ny vahoaka tahaka izao teo amin'ny fiainako. Mandainga amin'ny firenenkafa izy fa tsy manitsakitsaka ny zon'olombelona. Nandainga izy fa hihaino ny tanora, saingy mbola tratran'ny fanorisorenana ihany ny olona. Ny tiako ovain'ny firenena dia ny hanarahany ny fitakiana folo . Ireo fitakiana folo ireo no tsara indrindra. Raha afa-manao izany isika, dia ho anjakan'ny demaokrasia tokoa ny firenena.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/09/25/149607/
 lahatsoratra etoana: https://prachatai.com/english/node/8741
 fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2014: https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Thai_coup_d%27%C3%A9tat
 fitakiana telo: https://mg.globalvoices.org/2020/07/28/149080/